စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း အတက်၊ အကျ ထိန်းညှိနိုင်ရန် လွတ်လပ်သော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း ကြီးကြပ်ရေးကေ - Yangon Media Group
စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းအတက်၊ အကျကို ထိန်းညှိနိုင်ရန်အတွက် လွတ်လပ် သော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းကြီးကြပ် ရေးကော်မတီ၊ ကော်မရှင်တို့ဖွဲ့စည်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး လက် ထောက်အတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းဦးက ပြောသည်။ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က နေ ပြည်တော် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနတွင်ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးမင်းမင်းဦးက ”အခု ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော် မတီတွေရှိတယ်။ အရင်တုန်းက ရေ နံနဲ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပ ဒေက ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးဘူး။ ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီ ကော်မတီတွေက လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မ ရှိသေးဘူး။ အခု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်းပဲ တကယ်ထိထိရောက် အရေးယူ တော့မယ်။ ဒီကော်မတီအောက် မှာရှိတဲ့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသ ကြီးမှာရှိတဲ့ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေမှာပါတဲ့ ဥပ ဒေအရပါတဲ့ ကော်မတီတွေက လိုက်လံစစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေကို အသိပေးချင်တာ အဓိက။
အရင်က ဒီကော်မတီ တွေက အလုပ်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ ဥပဒေဖွဲ့ပြီးမှ ဒီကော်မတီတွေက ဖွဲ့လို့ရတာ၊ အရင်တုန်းက အုပ်ချုပ် မှုနည်းလမ်းအရပဲ အရေးယူရ တာ။ ဥပဒေရှိလာရင်တော့ ဒီဥပ ဒေအတိုင်းပဲ ခြောက်လအပိတ်ခံ ရမယ်။ တစ်နှစ်ပိတ်ခံရမယ်။ ထောင် ဒဏ်ငွေဒဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို တော့ ဥပဒေအတိုင်းပဲ အရေးယူ သွားရတော့မယ်။ စက်သုံးဆီဈေး နှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက မထိန်းချုပ်ဘူးလားဆိုတာက စက် သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စီးပွားရေးဈေးကွက်စနစ် အရ ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချတဲ့စနစ်ကို သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီစက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းကိုထိန်းညှိဖို့ဆိုရင် လွတ် လပ်တဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးကြပ်တဲ့ကော် မတီ ကော်မရှင်တို့ ဖွဲ့စည်းရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဈေးနှုန်း ကြီးကြပ် ရေးကော်မရှင်တို့ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်။ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်။
အဲဒီ လိုကြီးကြပ်တဲ့ ကော်မရှင်တွေ ဖွဲ့ ထားပြီးမှ အဲဒီလိုကြီးကြပ်တဲ့ကော် မရှင်တွေက နိုင်ငံတကာက ဈေး နှုန်းတွေကိုလေ့လာမယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိစက် သုံးဆီအသုံးကိုကြည့်မယ်။ ဒါတွေ ကို ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းကို ဘယ်လောက်မှာ သတ် မှတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို ထုတ် ပြန်မှရမှာ၊ ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်း ပြီးမှ ဒါတွေကိုတော့ တဖြည်းဖြည်း လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဆို ရင်တော့ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်တဲ့ ကော်မရှင်တွေဖြစ် လာနိုင်တယ်။ အဲဒီလွတ်လပ်တဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးကြပ်တဲ့ကော်မတီ ကော် မရှင်တို့ ဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတာကလည်း ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်တဲ့လူတွေ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေ ဒါတွေနဲ့ စုဖွဲ့ ပြီးတော့မှ ကော်မရှင်တွေ ဖွဲ့စည်း ပြီးတော့မှ ဒါတွေကိုလုပ်ရမှာ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီလိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတာက လည်း ဒါတွေကိုမဖွဲ့စည်းပေးသေး ဘူးလားဆိုတာနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ ဒါ တွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် ရုံးအ ဆောက်အအုံတို့၊ ဘတ်ဂျက်ငွေတို့ ဒါတွေက နိုင်ငံတော်က ပြဋ္ဌာန်းပြီး တော့မှ ဖွဲ့စည်းရမယ့် အဖွဲ့အစည်း တွေဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီ သိုလှောင်စခန်းများနှင့် စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များမှ သို လှောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် စက် သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့် အခြင် အတွယ် မှန်ကန်ပြည့်ဝမှုရှိစေရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသ ကြီး ပြည်နယ်များတွင် ဖွဲ့စည်း ထားပြီးဖြစ်သည့် ရေနံနှင့် ရေနံ ထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများက Mobile Fuel Lab မော်တော်ယာဉ်မပါဘဲ ရှောင်တ ခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေး၍ စက်သုံး ဆီနမူနာများကိုရယူပြီး သက်ဆိုင် ရာဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ ပေးပို့စမ်း သပ်စစ်ဆေးမှုများကို ယခုထက် ပိုမိုတိုးမြှင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် Mobile Fuel Lab မော်တော်ယာဉ်ခြောက်စီး အသုံး ပြု၍ ရှောင်တခင်စစ်မှုများကို ဆောင် ရွက်ရာတွင် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကဲ့သို့ မြို့ကြီးများ နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ကိုသာ ဆောင် ရွက်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီသိုလှောင် စခန်းများနှင့် စက်သုံးဆီအရောင်း ဆိုင်များကို Mobile Fuel Lab မော်တော်ယာဉ်ခြောက်စီးအသုံး ပြု၍ ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှုများက ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ထိ စုစုပေါင်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ၄၄၄ ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၃၁) ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လိုင်စင်ရှိသူ မည်သူမျှစံချိန်စံညွှန်းအ ရည်အသွေးနှင့် အခြင်အတွယ်ပြည့် မီမှန်ကန်မှုမရှိသော ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းမပြုရဆိုသည့် တားမြစ်ချက် အား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ပုဒ် မ ၃၉(ခ)အရ ခြောက်လထက်မပို သော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ် သိန်း ၅ဝ အထိ ဒဏ်ငွေနှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်အရေးယူ ဆောင် ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း အပြင် ပုဒ်မ (၃၁) ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လိုင်စင်စည်း ကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း (သို့) ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ကို ပျက်ကွက် ခြင်းမရှိစေရဆိုသည့် တားမြစ်ချက် ကိုကျူးလွန်လျှင် ပုဒ်မ (၃၄) အရ သတိပေးခြင်း၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို ကာ လအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လိုင်စင်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်း (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်း စသည့်စီမံခန့် ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်၍ အရေးယူခံရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များကို ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမှုအား ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေ ကြောင်း သိရသည်။
ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဆက်ကနေ တစ်ဆက် ပြောင်းတယ်ဆိုတာ တိုက်ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး . . . လူမင်း
ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော စာရေးဆရာဘုတလင်ချစ်လေး ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၅ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ ‘ဆရာချစ်’??
အမှန်တရားပေါ်ချင်လျှင် ရှောင်တခင်ဝင်စစ်ပေးရန်နှင့် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဆူပူနေမှုများကိုေ??